Течет кран печки ваз 2107: Течет кран отопителя ваз 2107 что делать. Замечен тосол в салоне — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля
Течет кран печки ваз 2107: Течет кран отопителя ваз 2107 что делать. Замечен тосол в салоне
Тосол течет в салон. Как устранить течь тосола.
Замена крана отопителя ВАЗ 2105. Чем официалы, лучше сам!
ВАЗ 2107, 2105, 2104 မီးဖို ၏ ရေ တိုင် ကီ အစားထိုး ခြင်း — ယင်းသည် အ ဘယ် ကြောင့် စီးဆင်း သည်၊ ၎င်းကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖယ်ရှား။ တပ်ဆင် ပုံ + ဗွီဒီယို
ရည်ရွယ်ချက်၊ ချွတ် ယွင်း မှုများ နှင့် ВАЗ 2104-2107 မီးဖို ၏ ရေ တိုင် ကီ အစားထိုး ခြင်း
၃.၂.၁ ဗွီဒီယို — ВАЗ 2107 ၏ နမူနာ ကို အသုံးပြု၍ အပူ ဖလှယ် စက် ကို အစားထိုး ခြင်း
၃.၅.၁ ဗီဒီယို — «Жигули» တွင် မည် သည့် ရေ တိုင် ကီ ကို ရွေးချယ်မည်
ကား မီးဖို ရေ တိုင် ကီ ဆိုတာဘာလဲ
ВАЗ 2104-2107 တွင် မီးဖို ရေ တိုင် ကီ တပ်ဆင်ပြီး မည် သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင် သနည်း
မီးဖို ရေ တိုင် ကီ ကိရိယာ
ဓါတ် ရောင်ခြည် ချွတ် ယွင်း ခြင်း၊ သူတို့၏ ရောဂါ လက္ခဏာများ နှင့် အကြောင်းရင်းများ
အကယ်၍ ရေ အေး သည် ရေ ကို မဟုတ်ဘဲ အအေး စနစ်တွင် က အရည် တွင် လူတို့၏ ကျန်းမာရေး ကို အန္တရာယ် ပါဝင်သော ကြောင့် အအေး ယို်မှုကို အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှား ပစ် ရမည်။
ВАЗ 2104-2107 မီးဖို အတွက် ရေ တိုင် ကီ ကို ဘယ်လို အစားထိုး ပြီး ဘယ်လို ပြုပြင် ရမလဲ
အ ဘယ် ကိရိယာများ လိုအပ် လိမ့် မည်
မီးဖို ရေ တိုင် ကီ ဖယ်ရှား ပစ် ရန် က ဘယ်လို
ဗီဒီယို — ВАЗ 2107 ၏ နမူနာ ကို အသုံးပြု၍ အပူ ဖလှယ် စက် ကို အစားထိုး ခြင်း
မီးဖို ရေ တိုင် ကီ ယို စိ မ့်မှုကို ဘယ်လို ပြုပြင် မလဲ
ဗီဒီယို — မီးဖို ရေ တိုင် ကီ ကို ဂ ဟေ ဆက် ခြင်း
ရေ တိုင် ကီ ဖျတ်
အပူ ဖလှယ် စက် ကို တပ်ဆင် နည်း
ဗီဒီယို — «Zhiguli» ကိုရွေးချယ်မည့်ရေတိုင်ကီ
базар жок батка оте жаксы тусиндирдин???
Мне приятель сказал на 2105 и без крана отопителя куча чего навернулось Ж)) Нет,вот мне сказали про это надо посмотреть. Спасибо.
Приветствую Сергей, у меня тоже машина ипсум, проблема на высоких оборотах, дымит хотя бензин не ест,пробег 380.000тыс,интере сно в чем проблема?
Это промыть их как в твоем видео? У моего другана на VAZ и без крана отопителя куча чем заняться можно Ж))
Обуждение раздела Замена крана отопителя ВАЗ 2105
привет я делаю привью для начала видео в ютубе делаю очень красиво и дешево!! могу показать свои изделья если вас заентерисовало могу с вами сотрудничить
О кране отопителя все понятно… … ты гений!!!)ты оператор и мастер …!)руки из плеч!!!браво!!
вы глубоко заблужлаетесь что ссылка есть а её нету
Бен ⚠Предупреждение за CapsLock
ЗА 200000 Я КУПЛЮ СЕБЕ СТАРУЮ ХОНДУ, А СЕМЕРКУ БОЛЕЕ 50000 НЕ ДАЮ (МНЕ ВСЕ РАВНО КАКАЯ СЕМЕРКА БУДЕТ)
По крану отопителя все ясно. Понятней тебя мне ещё никто не рассказывал
уменя проблема такая вода кипит все поминал помпу термастат ГВц пракладку дачик вентлятра крышку патрупка верхни надуваеца нижныи холодни темп.110 пок.подскажите пожалуста
Все гениальное просто!лайк однозначно!!!
это сколько жрёт инвертор при запуске компрессора?да и вообще сколько кушает и от аккумулятора и самого бензина,можно конечно использовать,когда ничего другого не остаётся, но стоит ли оно?это скорее всего подойдёт для самоделкиных любителей
Это уже не тема, надо геркон.
Мне друг сказал на ваз и без крана отопителя много чего полетело. а чем брызгаете на бачки?
Слишком много лишних слов. Ближе к делу.
Хэло друг)Как дела? Ты молодец всегда смотрю твои видео,как сказать как могу поднимаю твой канал вем про тебя рассказываю но почему у тебя всегда лампочка бензина на нуле)?
У приятеля и без крана отопителя на Вазике 2105 куча чего навернулось 🙂 Он пока уганял эту тачку снял видео
Прикольно, но если б у меня была ещё своя Тойота!)
А на w202 такая же система???
Редкие трудности с краном отопителя это еще ничего 😉 ниче, по началу сложно, потом норма!!!
Сергей а вы вдэшкой пользуетесь? 🙂
Сольвент лучше отмывает и растворяет лаки в двс.
Видимо это правда что украинцам в питьевую воду какую-то наркоту добавляют,которая на способность мыслить влияет,правильно выше говорят тут не только изобретения даже рацпредложение никакого нет.а о качестве исполнения и говорить не приходится.но мужик молодец вместо того что б пьянствовать с холодильниками играется,все полезней для здоровья. Касательно того что кондиционер не завязан на двигатель так у меня еще в 1987 году была Мицубиси 1982 года выпуска и кондор там работал от электроматора,так что его можно было включать даже с выключенным двигателем Ж)) Постоянные геморрои с краном отопителя подзадолбали.
А как панель снимал нет видоса?
Мне друг сказал и без крана отопителя на 2105 полно чего поломалось! +Андрей Лапочкин приятно здесь видеть столько адекватных комментариев- видно что растёте! У меня тоже вечная проблема, но не с краниками, а с радиатором отопителя. За свой небольшой опыт владения нивой, уже с закрытими глазами его поменяю. И все резиновые прокладки обмазываю герметиком, т.к. те что в магазинах с дефектами литья и облоем, при даже при равномерной затяжке их получаются щели, из которых сочится антифриз
Утечка расходных материалов может возникнуть в результате повреждения шлангов или системных соединений или ослабления крутящего момента на любых соединениях.Проверить это можно довольно просто: подложите под машину кусок картона, конкретно в вашем случае все просто — вы даже знаете, куда он течет. Через некоторое время проверьте места утечек охлаждающей жидкости.
Одна из самых частых причин — неисправный радиатор. О поломке этого механизма можно узнать по запотевшим стеклам в машине, мокрому ноге коврика переднего пассажира. Если вы видите лужу под ковриком, то придется разбирать часть салона впереди.
Засорение гребенки печи — одна из самых распространенных проблем.Это может произойти из-за образования накипи или из-за попадания масла в антифриз. Плиту можно снять и тщательно промыть. После этого он по-прежнему будет служить автовладельцу.
Последний вариант требует более детального рассмотрения, так как данная неисправность наиболее опасен для работы мотора.В случае попадания антифриза в моторное масло выхлопные газы автомобиля меняют свой цвет — они становятся белыми, как пар. Помимо выхлопных газов меняет цвет и само масло. Это можно определить по щупу. Если попадание антифриза в масло будет установлено на начальном этапе, то работа двигателя не будет нарушена и последствия не будут серьезными в будущем.
Если утечка антифриза возникла из-за того, что электролиз разрушает сердечник печки, то лучше всего подключить заземляющий браслет. Второй вариант — замена алюминиевого материала на латунь. Обычно такая проблема возникает на моделях Chrysler.
Помимо прочего, следует также проверить расширительный бачок антифриза на наличие неисправностей. Его основная функция — слив излишков антифриза. Дополнительная функция заключается в обеспечении резервуара, когда антифриз вытесняется давлением.Это случается, когда система переносит чрезмерно высокие температуры. При понижении температуры охлаждающая жидкость возвращается на прежнее место. Таким образом, при негерметичности этого бачка антифриз не возвращается в систему, а постепенно уменьшается, что приводит к перегреву двигателя. Для ремонта трещин в резервуаре рекомендуется использовать силиконовый клей. В случае полной замены убедитесь, что соединения с баком выполнены правильно, так как любой перегиб может привести к образованию новых трещин.
Если в шланге обнаружена течь, то самое простое решение этой проблемы — полная замена.Ремонтировать шланг очень сложно и невыгодно. Лучше купить новый и заменить. При этом рекомендуется заменить хомуты, так как со временем кольца теряют свои свойства.
Появление течи антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2107 — достаточно серьезная проблема, чтобы обратить на нее внимание и немедленно приступить к ее устранению.Утечка охлаждающей жидкости может привести к перегреву и даже к повреждению двигателя.
Для каждого из вышеперечисленных мест существуют разные способы решения проблемы. Естественно, самый простой способ — заменить поврежденный элемент. Это касается всех возможных проблем, если только антифриз не течет в точках соединения труб.В этом случае замена, скорее всего, не потребуется, достаточно затянуть хомут.
Это самая неприятная из неисправностей, в результате которой из системы вытекает антифриз. Если пробой произошел снаружи прокладки, утечку можно увидеть невооруженным глазом на двигателе.Хуже, если проколка проколота рядом с цилиндром. В этом случае дефект можно определить по косвенным признакам — повышение уровня масла в поддоне картера, большое количество водяного пара из выхлопной трубы. Вне зависимости от места повреждения выявленный недостаток можно устранить только заменой прокладки.
Замена крана крана печки ваз 2107 необходима, когда начинает пропускать антифриз. Кран радиатора отопителя расположен так, чтобы протекающий антифриз попал на ковер пола и пропитал его.Особенно неприятно это зимой, когда нет возможности просушить ковер и влага будет долго оставаться в салоне.
Теперь предварительно собираем всю конструкцию: прикручиваем под углом (7) к обоим концам, на них штуцер (8), на один конец надеваем трубу (1) с ранее снятым штуцером (2), надеваем другой — в моторный отсек. Поскольку между моторным отсеком и салоном установлена ​​металлическая перегородка (3) с отверстиями меньшего диаметра, чем у нашей новой фурнитуры, то отверстие необходимо расширить круглым напильником, колодцем или дрелью, которая будет под рукой. . Регулируем длину трубы и при необходимости подшиваем, так же определяем углы соединения крана с углами, чтобы было удобно открывать / закрывать кран.
Когда все для нас настроено, делаем финальную сборку конструкции. Все соединения предварительно очищены и обезжирены. Устанавливаем на фум-ленту или полотно, покрытые герметиком, резьбовые, тонким слоем промазываем фурнитуру, надеваем насадки и стягиваем струбцинами. Так же на герметик надеваем прокладку и стягиваем, стараемся не тянуть, иначе может выдавиться. Не забывайте о короткой выдержке, указанной на упаковке.
Открутил кран от печки, оказалось, что прокладка лопнула, и этот маленький нарост, как гильза, вставленный в трубку от крана, немного повел. Радиатор печки, тогда у меня был новый образец, с пластиковыми бортиками, вот пластик повел от температуры и неправильной затяжки. Заметил, что одна шпилька притянута к печке, а вторая вылезла.
Далее, открутив саморезы, фиксирующие складскую полку, демонтируем ее.
Работа проводится в обратной последовательности и не должна вызывать никаких затруднений, кроме одного момента — при фиксации крышки троса управления следить за тем, чтобы движением рычага управления клапаном отопителя полностью открывался и закрывает это.В противном случае следует отрегулировать крепление кожуха до получения положительного результата. Далее надеть и затянуть подающую трубку хомутом для шланга.
Отремонтировать водопроводный кран зачастую намного проще, чем его заменить, поэтому эту несложную операцию стоит освоить каждому домашнему мастеру.
Перед тем, как приступить к ремонту, нужно перекрыть воду вентилем. Обычно он находится в квартирах в туалете, а если это садовый участок, то в том месте, где ваша часть водопровода удаляется от трассы. В современном корпусе может быть установлена ​​и отдельная арматура для каждого крана. В этом случае их стоит искать под раковиной, мойкой или газовой плитой. После того, как вода заблокирована, можно приступать к ремонту. Перед тем, как повернуть ручку, вам нужно осторожно открыть водопроводный кран, чтобы шпиндель и башмак отошли от седла.Заводную головку удобнее всего поворачивать газовым ключом, но можно использовать и гаечный ключ подходящих размеров. После окончания ремонта необходимо снять головку, удалить из паза старый уплотнитель, намотать льняную нить по направлению круговой стрелки. Когда форма уплотнения становится похожей на конус, его необходимо смочить водой, чтобы волокна не свернулись. Головку можно заменить. Как правило, в головке крана может потребоваться ремонт четырех элементов: прокладки, клапана, шпинделя или втулки сальника.Слесарь-сантехник со стажем может определить проблему без демонтажа крана.
В том случае, если кран потек, а течь длится несколько дней, даже при полностью закрученном шпинделе, в этом случае неисправность — прокладка. Он может изнашиваться или затвердевать, а также может порезаться острыми краями седла. Необходимо вывернуть головку и повернуть винт, фиксирующий прокладку. Уместнее и удобнее использовать прокладку, диаметр которой на миллиметр больше, чем у седла клапана.Так прокладка будет крепко держаться в гнезде. Выступающие края можно обрезать ножницами. Теперь можно все собрать.
Ремонтируем водопроводный кран: кран
Если кран не новый, иногда может получиться так, что стенки крана или штуцера осыпались. Если большая половина окружности повреждена, клапан не подлежит ремонту. В таком гнезде прокладка не центрируется, а постоянно перемещается по седлу, из-за этого кран течет.Клапан можно купить в магазине или обработать на токарном станке. Однако проще всего переставить вентиль из старой головки, который обычно доступен у находчивого домашнего мастера.
Иногда бывает, что из крана постоянно течет мощная струя воды, и нет возможности ее перекрыть: маховик очень легко крутится вместе со шпинделем. После того, как вода заблокирована, голову можно вывернуть. Здесь видно, что несколько концевых резьб внешней резьбы шпинделя со стороны маховика стерты.В том случае, если речь идет об общем клапане, можно намотать головку на место и прибинтовать маховик, максимально подавая вперед, пока не появится возможность заняться ремонтом.
Ремонтируем водопроводную воду: корпус и втулка
Корпус также имеет резьбу, которая подвергается стиранию. Обычно корпус совмещен с двумя веретенами. Часто при открытии крана из сальника начинает капать. Если капли попадают в умывальник, ванну или раковину, это не так плохо, как если бы они капали для других целей.Для начала необходимо затянуть втулку ключом. Нельзя сильно затягивать, иначе он перестанет крутиться. В случае затяжки втулки необходимо обновить набивку канавки сальника. Делать это нужно при закрытом кране, главный клапан нельзя перекрывать.
Обычно отремонтированный водопроводный кран оказывается в эксплуатации лучше нового, поэтому ни в коем случае нельзя выбрасывать пришедшую в негодность головку, так как некоторые ее элементы могут пригодиться.
မည်မျှပင် စိတ်ချ ရသည် ဖြစ်စေ၊ အ နှေး နှင့် အမြန် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ပြိုကျ သွားသည်။ ВАЗ 2104-2107 ပိုင်ရှင်များ သည် တစ်ခါတစ်ရံ တွင် ခရီးသည် အခန်း ၏အ သို့မဟုတ် မီးဖို ရေ ဒီယို တွင် ယို စိ်မှု ပြ с နာ များ နှင့် ရင်ဆိုင်ရ လေ့ ရှိသည်။ ဤ ကိစ္စတွင်, သင် အကြောင်းပြချက် နှင့် အတူ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း ထုတ်ကုန် ပြုပြင် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်။
1 Радиатор печки автомобиля ဆိုတာဘာလဲ
၁.၁ ВАЗ 2104-2107 တွင် မီးဖို ရေ တိုင် ကီ မည် သည့် နေရာတွင် တပ်ဆင်ပြီး မည် သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင် သနည်း
1.2 ပေး စက် ရေ တိုင် ကီ ၏ прибор
၂ ဓါတ် ရောင်ခြည် ချွတ် ယွင်း ခြင်း၊ သူတို့၏ ရောဂါ လက္ခဏာများ နှင့် အကြောင်းရင်းများ
3 ВАЗ 2104-2107 မီးဖို အတွက် ရေ တိုင် ကီ ကို မည်သို့ အစားထိုး။ ပြန်လည် ပြုပြင် ရမည် နည်း
၃.၁ မည် သည့် ကိရိယာများ လိုအပ် သနည်း
၃.၂ မီးဖို ရေ တိုင် ကီ ကို ဖယ်ရှားနည်း
၃.၃ မီးဖိုထဲ ရေ တိုင် ကီ ယို စိ မ့်မှုကို မည်သို့ ပြုပြင် ရမည်
၃.၃.၁ ဗီဒီယို — မီးဖို ရေ တိုင် ကီ ကို ဟေ ဆက် ခြင်း
3.3.2 သည့် ရေ တိုင် ကီ ဖ လပ်
၃.၄ အပူ ဖလှယ် စက် ကို မည်သို့ တပ်ဆင် ရမည် နည်း
3,5 ရေ တိုင် ကီ ရွေးချယ်ရေး
ကား တိုင်း လို လို တွင် အတွင်းပိုင်း အပူ ပေး စနစ် ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်း တွင် အဓိက ဒြပ် စင် များထဲမှ ရေ တိုင် ကီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ အပိုင်း ၏ ကျေးဇူး ကြောင့် အပူ ကို အအေး မှ ဖယ် ထုတ်ပြီး ခရီးသည် အခန်း သို့ ပို့ သည်။
အားလုံး ဂန္ Жигули အပေါ် မီးဖို ရေ တိုင် ကီ ရှေ့ панель ကို အောက်မှာ အထူး коробка ထဲမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ထုတ်ကုန် သည် အပူ ဖလှယ် သူ ဖြစ်ပြီး အဓိက လုပ်ဆောင်ချက် မှာ မှ အအေး (အေး ခဲ) မှ အပူ ကို ပင် တစ် လျှောက်လုံး ဖြ။ ဒီ တပ်ဆင် ပါဝါ ယူနစ် ၏ အဓိက ရေ တိုင် ကီ ကဲ့သို့ တူညီသော အတွက် အလုပ်လုပ်တယ်။ မီးဖို သည် ပုံမှန် လည်ပတ်နိုင်ရန် အပူ ဖလှယ် သူ ကို စဉ် ဆက် မပြတ် ပေးရန် လိုအပ်သည်။ ရေ ဒီယို စက် ကို ပိုက် နှင့် ရော်ဘာ ပိုက် များ အင်ဂျင် အအေး ပေး စနစ် နှင့် ရေ စုပ် စက် (စုပ် စက်) မှတ ဆင့် အဆက်မပြတ် အရည် ပေးသည်။
«классический» တွင်ရှိသော အပူ ပေး စက် သည် ရှေ့ ဘောင် အောက်ရှိ အထူး ထဲတွင် တည်ရှိသည်
အပူ ဖလှယ် စက် တွင် бак (၂) ခု နှင့် ကြေးနီ (သို့) လူ မီ နီ ယံ ပျား လ ပို့ များ ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ တ င့်ကား အစိတ်အပိုင်း ၏ ထုတ်လုပ်မှု ပစ္စည်း ပေါ် မူတည်။ ဂ ဟေ သို့မဟုတ် герметик ခြင်း ဖြင့် ချိတ်ဆက် နေကြသည်။ ရေ တိုင် ကီ အပြင် မီးဖို ၏ အဓိက ယူနစ် ပန် ကာ ယူနစ် ဖြစ်ပြီး လီဗာ နှင့် ဘယ် များ ပါဝင်သည်။
1 — резистор အမြန်နှုန်း ၏;2— ပန် ကာ ထည်;3— ပန် ကာ လမ်းညွှန် ထည်;4— စာလုံး အ သေး ၏ နွေ ဦး ပိုင်ရှင်များ၊ ၅ — ရေ တိုင် ကီ အိမ်၊ ၆ — လေ ဝင်ပေါက် အ ဖုံး၊7— прокладка တိုင် ကီ; 8 — မီးဖို ရေ တိုင် ကီ;9— အအေး ပိုက်; 11 — အပူ ပေး လျှပ်စစ် မော်တာ ၏ လှုံ့ ဆျော; 12 — အပူ ပေး စက် လျှပ်စစ် မော်တာ; 13 — မီးဖို ၏ နွေ ဦး တံခါး ကျင်; 14 — မီးဖို မော်တာ ခေါင်း အုံး; 15 — လေကြောင်း ပြွန် ၏ демпфер; 16 — မီးဖို ၏ အောက်ခြေ အ ဖုံး (демпфер), ခြေထောက် ချွတ် မှုတ်
အပြင်ဘက် မှ လေသည် ဘော နက် ထဲ ရှိ အ ဖွ စီးဆင်း သွားပြီး လေ စွ န့်် အောက် အင်ဂျင် အခန်း ရှိ လေ င ပေါက်ပေါက် ၀ င်သည်။ ထိုအခါ လေ စီးဆင်းမှု သည် အပူ ဖလှယ် စက် ထဲသို့ ၀ င်ပါသည်။ ၎င်းကို အအေး (အပူ) က အပူ ပေးသည်။ ကား သည် ပျင်း နေ လျှင် သို့မဟုတ် ခရီးသည် အခန်း အမြန်နှုန်း ဖြင့် မောင်း သည့် အခါ အပူ ပေး စက် ကို ဖွ်သည်၊ ရေဒီယိုမှ တ ဆင့် အေး သော လေ ကို မောင်းနှင်။ အပူ ပေးပြီး ခရီးသည် အခန်း သို့ ပို့ သည်။
အဆိုပါ မီးဖို ရေ တိုင် ကီ အအေး ဖြ န့်ဝေ မှတ ဆင့် င့်ကား များ နှင့် ပျား ပို့ ကို ပါဝင်ပါသည်
ကား သည် အမြန်နှုန်း ဖြင့် ရွေ့လျား နေ သည့် အခါ လာမည့် နွေး သော လေ ကို မှုတ် ရန် ကို ဖန်တီး ပေးသော ကြောင့် ပန် ဖွ င့်နိုင် ပါ။ အ အေးလေ လေ အပူ ပေး စက် လေ အပူ ပေးလေ လေ ဖြစ်သည်။ အပူ ဖလှယ် စက် ထဲသို့ ၀ င်သည့် အရည် ပမာဏကို ဆို့ ရှင် ဖြင့် ထိန်း ညှိ သည်။ ထို့ကြောင့် အခန်း အတွင်းရှိ အပူချိန် ကို ပြောင်းလဲရန် ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါက ဥပမာ အား ကို အပူ နည်း အောင် ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပလပ်စတစ် ကို လှံ တံ နှင့် လီဗာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် လုံးဝ ပိတ်ထား သည်။
အဆိုပါ မီးဖို ထိန်းချုပ်မှု တော်တော်လေး ရိုး ရှင်း ပါသည်။ အလယ် ခလုတ် တွင် လက်ကိုင် အများအပြား ရှိသည်။
မီးဖိုထဲ ရေ တိုင် ကီ ပါ သော ВАЗ 2104, 2105, 2107 ကား များ လည်ပတ် နေစဉ် ပြုပြင်ရေး လိုအပ်သော ချွတ် ယွင်း မှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။ စည်းကမ်းချက် တစ်ခု အ နေ ဖြင့် ပြ အားလုံးသည် ခရီးသည် အခန်း ၏အ ပူ စွမ်းအား ကို လျှော့ချ အချက် ပေါ်လာသည်။ ဒီ ဖြစ်ရပ် အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေ အရှိဆုံး အကြောင်းအရင်း တွေကို သုံးသပ် ကြည့် ရအောင်။
အအေး စနစ် အတွက် လေကြောင်း သော့ ခတ်။ ထိုသို့သော ချွတ် ယွင်း မှုသည် အအေး စနစ် သို့မဟုတ် အင် အင် ဖ ရီ ဇင် ဆက်စပ်သော အင်ဂျင် အစိတ်အပိုင်းများ ကို အစားထိုး ခြင်း ၏ ကြောင့် မီးဖို သည် အားနည်းနေ သော လုံးဝ အပူ ပေးသော ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင် သည်။ အပူ ပေး စက် ကို အသုံးပြုရန် အတွက် သင့် အား လေ မှ ထုတ် ဖြင့် မောင်းနှင် ရန် လိုအပ်သည်။
မီးဖို ကို ထိ ပုတ် ပါ က ဖွ င့်သည့် လိုင်း ပိတ်ထား သည်။ အကြောင်းပြချက် မှာ ရေ ခဲ မု န့်အစား သုံး သော့ ခတ် ထားသော ယန္တရား ၏ ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်း ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပြ проблема နာ ကို кран သန့် ရှင်း ရေး သို့မဟုတ် အစားထိုး ခြင်း ဖြင့် သည်။
ထိ ပုတ် ပါ အ ပြည့် အ င့်သည့် ရေ ဒီယို သည် အေး လိမ့် မည်။ အဆိုပါ ပြ проблема နာ ကို ရေ စုပ် စက် နှင့် အတူ ပြ проблема နာ တစ်ခု ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ နိုင်ပါသည်။ တူရိယာ ဘား ပေါ်ရှိ ညွှန် ပြ သူ က အင်ဂျင် လျင်မြန်စွာ နေသော ကြောင့် ချို့ယွင်းချက် ကို သတိ မပြု မိ ခက်ခဲ သည်။ အင်ဂျင် လည်ပတ် မှု အပူချိန် (+90 ˚ C) အထိ နွေး နေပြီး မီးဖို ၏ подающая труба သည် အေး နေ လျှင်၊ генератор ခါး ပတ် သည် ကွဲ သွား နိုင်သည် насос မှ подающая труба တွင် ပိတ်ဆို့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
အ ၀ င်ပေါက် က ပူ ပြီး မီးဖို က နေ လေ အေးတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြ проблема နာ သည် ဂန္ထဝင် Жигули မော်ဒယ် များတွင် အတော်လေး တွေ့ရသည်။ အကြောင်းပြချက် မှာ ရေ ခဲ ရေ ခဲ များ၏ ပိတ်ဆို့ ထားသော ဆဲလ် များ ဖြစ်သည်။ ၎င်း မှာ ရေ ခဲ ရေ ခဲ အစားထိုး ယို စိ မ့ မှုများကို ဖယ်ရှားရန် အ ပို အသုံးပြုခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤ ကိစ္စတွင်, ရေ တိုင် ကီ ဖျက်သိမ်း နှင့် ဆေး ကြော ရ မည်ဖြစ်သည်။
အပြင် ၌ ဖြစ်စေ၊ အတွင်း၌ ဖြစ်စေ ပျား လ ပို့ ကို ပိတ်ဆို့ ထားသော ကြောင့် မီးဖို သည် နွေး ဓာတ် မ ကျ နိုင်သည်။
ဝင်ပေါက် နှင့် ထွက်ပေါက် များသည် ပူ။ လေသည် အေး သည်။ ဤ ပြ проблема နာ ကို အပူ ဖလှယ် စက် တွင် ရှုပ်ထွေး နေသော နေရာမှ ထုတ် ခြင်း ၏ ရလဒ် နေ ဖြင့် တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည် ပိုက် များ အ ကြားရှိ အအေး ဓာတ်ငွေ့ လည်ပတ် မှုကို တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေသည်၊ ဓါတ် ရောင်ခြည် ကိုယ် နှိုက် ကို ကျော်ဖြတ် နိုင်သည်။ ဤ ကိစ္စတွင်, စည်းဝေးပွဲ ကို အစားထိုး ခံရ ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အပူ ဖလှယ် သူ နှင့် ပြ နာ ပူ အစား အအေး ပေး စနစ် သာမက ယို စိ မှု ပုံသဏ္ဌာန် ကို ပါ ပြ သ နိုင်သည်။ အဆိုပါ ပြ проблема နာ ကို ကြမ်းပြင် ပေါ်မှာ ရေ အိုင် ၏ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၏ စစ်ဆင်ရေး ကာလအတွင်း ဘေးထွက် နှင့် ကား ရှေ့မှ တစ် ဦး အ ဆီပြန် ၏ အသွင်အပြင် အား ဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိ နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက် များ ဖြစ်နိုင်သည် —
အဆိုပါ မီးဖို смеситель မှတ ဆင့် အအေး ယို စိ မ့ ်;
ပိုက် က နေ ယို စိ မ့ ်;
ရေ တိုင် ကီ သူ့ဟာသူ ယို စိ မ့ ်။
ပထမ အ မှု နှစ်ခု တွင် ဟောင်းနွမ်း သော ဒြပ် စင် ကို အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ရေ တိုင် ကီ မှ ယို စိ မ့ က ပြန်လည် ပြုပြင်ရန် (သို့) အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်။
သင်၏ Жигули တွင် အပူ ပေး စက် радиатор နှင့် ပြ проблемы နာ ရှိပါက သင် မည်သို့ ပြုပြင် ရမည် ကို သင် သိ ရန် လိုအပ်သည်။
ပထမ ဦး စွာ လိုအပ်သော ကိရိယာများ နှင့် ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။
карбюратор နှင့် впрыск များမှ ဓါတ် ရောင်ခြည် ကို အစားထိုး လုပ်ငန်း ကို အလားတူ ပြုလုပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာ သင် အအေး ခံ စနစ်ကို အအေး ခံ စနစ်မှ ဖယ် ပစ် ရန် လိုအပ်ပြီး၊ အင်ဂျင် ပိတ်ဆို့မှုကို ဖြုတ်ပြီး အင် တာ ဖ ရီ ဇင် အား သင့် လျော် ကွန်တိန်နာ ထဲသို့ သွန် ထုတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ပြီးနောက်, သင် ယူနစ် ဖျက်သိမ်းရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။
အင်ဂျင် အခန်း ရှိ မီးဖို ၏ ရေ တိုင် ၏ ၀ င်ပေါက် နှင့် ထွက်ပေါက် ပိုက် များကို ညှပ် များကို လျှော့ ပေးပြီး ရေပိုက်များ သည်။
ညှပ် များကို ဖွ င့်ပြီးလျှင် ရေ တိုင် ကီ ပိုက် မှ ရေပိုက်များ ကို ဆွဲထုတ် လိုက်သည်
အလှပြင်ဆိုင် သို့ ပြောင်းရွှေ့ သွားသောအခါ လက်အိတ် အခန်း အောက်ရှိ စင်ပေါ် ၏ တွယ် ကပ် မှုကို ဖွ င့်လိုက်သည်။
လက်အိတ် အိတ် အောက်ရှိ တည်ရှိ သည့် စင် ညာဘက် винт နှစ်ခုကို တစ်ခု နှင့် ဘယ်ဘက် တွင် တစ်လုံး ဖွ်ပါ
ကမ်းလွန် ရေ တိမ် ပိုင်း ဖယ်ရှား လိုက်သော အခါ မီးဖို ပေါ် ထိ ပုတ် ပါ။ ၇ မီလီမီတာ လိမ် ဖဲ့ ခြင်း ဖြင့် ကေ ဖြုတ်ပြီး ပြောင်း လွယ် ရှိသော ဒြပ် ဘေး ဘက်သို့ ရွှေ့ ပါ။
၇ မီလီမီတာ လိမ် ဖဲ့ ခြင်း အား ဖြင့် အပူ ပေး စက် ပုတ် ထိန်းချုပ်ရေး ကေ ဘယ် လ် အတွက် စွဲ စေ ခြင်းကို ဖြုတ် ပါ
ရေ တိုင် ကီ သို့ ရောက်ရန် မီးဖို အ တံခါး များကို ဝက် အူ လှ ည့်ဖြင့် ဖယ် box ၏ အောက်ပိုင်း ကို ဖယ်ရှား ပါ။
အပူ ပေး စက် ၏ အောက်ပိုင်း ကို ဖယ် သင် ဝက် လှ ည့်ဖြင့် တံခါး ကျင် ၄ ခုကို ရန် လိမ့် မည်
အပူ ပေး စက် ကို ထိ ပုတ် ပါ။
ရေ တိုင် ကီ ဖယ်ရှားရန် သင့် ဆီသို့ သာ ဆွဲ ပါ
ကျနော်တို့ သော့ ခတ် ယန္တရား ၏ ဆွဲထား ဝက် အူ ဖြုတ် နှင့် တိုင် ကီ အစားထိုး သို့မဟုတ် ပြန်လည်။
ထိ ပုတ် ပါ က သော့ ခ လောက် ၂ ခုကို ၀ င်ပါ။ ပြွန် မှ ဖြုတ် လိုက်ပါ၊ တံဆိပ် ခတ် သည့် အရာများကို စစ်ဆေး ပါ။ ယန္တရား ကို စစ်ဆေး ပါ။
ပြွန် အဟောင်း မှ ပြွန် ကို ဖြတ်၍ တံဆိပ် ခတ် သည့် ရော်ဘာ ဖယ်ရှား ပါ
အကယ်၍ ВАЗ 2107 သို့မဟုတ် အခြား ဂန္ထဝင် Жигули မော်ဒယ် ၏အ ပူ ပေး စက် радиатор ထွက်သွား ပါ က ပြ проблема နာ ကို နည်းလမ်း များစွာ ဖြင့် ဖယ်ရှား နိုင်သည်။
အပိုင်း အသစ်တစ်ခု ကို အတူ အစားထိုး;
အထူး ပေါင်း ထည့် ပါ။
အဟောင်း အပူ လဲလှယ် ပြုပြင်။
အကယ်၍ ပထမ ကိစ္စတွင် ပြ задачи နာ မ ပေါ်ပေါက် ပါ က ထပ် ဖြ ည့်ပါ ၀ င်အရာများကို ပို၍ ဂရုတစိုက် ကုသ သင့် သည်။ ၎င်းသည် ထိုကဲ့သို့သော ရန်ပုံငွေ များသည် ယို စိ မ့်ရုံ ဒီယို သတ္တိ ကြွ ဆဲလ် များကိုလည်း ပိတ်ဆို့ စေ ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း အစိတ်အပိုင်း ကို ပြုပြင်ခြင်း က ပို ကောင်းသည်။ သင့် တွင် ဂ ဟေ သံ အတွေ့အကြုံ ရှိပါက ဂ ဟေ ဖြင့် ပြ проблема နာ ရှိသော နေရာကို (ကြေးနီ ရေ ဒီယို တွင် သာ) ပြုပြင်ရန် ကြိုးစား နိုင်သည်။
အလုပ်လုပ်ရန် သင့် အား အောက်ပါ ကိရိယာများ နှင့် ပစ္စည်းများ လိုအပ် လိမ့် မည်။
ရေ တိုင် ကီ ကို ဖြုတ် ပြီးနောက် နေရာကို အအေး ရောင် ၏အ ရောင် နှင့် အ ညီ အရောင် စက် တစ်ခု ဖြင့် တွေ့ရှိ နိုင်သည်။ ပြုပြင်ခြင်း ၏ အနှစ်သာရ သည် အောက်ပါ အဆင့် များသို့ ဆင်း သည်။
ယို စိ မ့်မှုများကို စက္ကူ ဖြင့် သန့် ရှင်း ခြင်း၊
အ စာ မ ကြေ ခြင်း၊
ဂ ဟေ နှင့် အတူ ဂ ဟေ။
ထို့အပြင် ဓာတ်ငွေ့ မီး ရှူး ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင် သည်။ ပြုပြင် ပြီးနောက် ရေ ဒီယို ကို ဆေး ကြော ပြီး ယို စိ မ့်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေး ပါ။
ဖ လပ် ခြင်း အတွက် ရေ တိုင် ကီ ကို ရေ ပိုက် ဖြင့် အသုံးပြုပြီး ရေ ထိ မည်။ ရေ တိုင် ကီ ၏ တင်းကျပ် မှုကို စစ်ဆေးရန် တာ စုပ် စက် (သို့) တွန်း စက် ကို သုံး နိုင်သည်။ အပူ ဖလှယ် စက် ၏ တစ် ပေါက် သည် လက်ချောင်း တစ်ချောင်း နှင့် ပိတ်။ လေ ကို အခြား တစ်လုံးမှ ဖြတ် ထုတ် သည်။ အပိုင်း ကို သူ့ဟာသူ ရေ ပုံး တစ် ပုံး ထဲ နှစ် မြှုပ် ရမည်။ လေ ပူဖောင်း မရှိရင် ပြုပြင်မှု အောင်မြင် သွားတယ်။ ဒီလို မှ မဟုတ်ရင်, ဂ ဟေ ထပ်ခါတလဲလဲ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရိုး ရှင်း နှင့် အတူ အစားထိုး သည်။
ရေ တိုင် ကီ ၏ တင်းကျပ် မှုကို စစ်ဆေးရန် ဖိအား တစ်ခု သို့မဟုတ် လက် ဖြင့် စုပ် စက် တစ်ခုမှ လေ ကို ထုတ်ပေး သည်
အချို့သော ကား ပိုင်ရှင်များ သည် အအေးမိ ခြင်း သို့မဟုတ် တံဆိပ် ခတ် ခြင်းကို ယို စိ မ့်စေရန် အသုံးပြု ကြသည်။ ဤ ရွေ့ ကား တ္ထု များ များ နှင့် ယခင်က သန့် စင် နှင့် обезжиренный မျက်နှာပြင် ပေါ်တွင် လျှောက်ထား ကြသည်။ မည် သည့် နည်းလမ်း နှင့် မည် သည့် နည်းလမ်းကို ဦး စား ပေးမည် ဆိုသည်မှာ အပေါ်တွင် သာ မူတည် သည်။
ရေ တိုင် ကီ တပ်ဆင် သည့် အခါ မဖြစ်စေရန် တံဆိပ် ခတ် ခြင်း နှင့် ပိုက် အသစ်များ အသုံးပြုခြင်း အကြံပြု ပါသည်။ установка ကို အောက်ပါ နိုင်ရန် အတွက် ထွက် ယူသွား တတ် ၏။
တစ် ဦး установить прокладку လုပ် ပါ နှင့် ထိ ပုတ် ပါ ရန် ဝင်ပေါက် ပြွန် радиатор ဖို့။
ရေ တိုင် ကီ ကို တပ်ဆင် စဉ် တံဆိပ် ခတ် အသစ်များ အသုံးပြုရန် အကြံပြု ပါသည်
သော့ ခတ် ယန္တရား ကို အပူ ကူးစက် နှင့် တွဲ ထားသည်။
ရေ ပွက် ပွက် စက် တစ်ခု နှင့် အတူ ရေ ပိုက် အသစ်တစ်ခု ကို ပုတ် ပါ
အ ရ ပျ ၌ ရေ တိုင် крепление။
သူတို့ က трос управления краном ကို фиксировать ပြီး၊ အ ပြည့် အ ဝ ဖွ င့ ်ပြီး ပိတ်ဖို့ ညှိနှိုင်းမှု လုပ်ဖို့ မေ့နေတယ်။
အ ဆို့ ရှင် အ ပြည့် အ ဝ ဖွ င့ ်ပြီး ပိတ် နိုင်ရန် အတွက် кабель ကို ညှိ ရန် လိုအပ်သည်
ရေ ငွေ့ ပြွန် များ ပေါ်တွင် တံဆိပ် ခတ် ခြင်းကို အသုံးပြု သည်။
တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တိုးမြှင့်စေရန် တံတား ပိုက် ကပ်၍ မ ပိတ် подающая труба သို့ герметик အနည်းငယ် အသုံးပြု သည်။
မီးဖို အ ဆို့ ရှင် ပွ င့်နေကြောင်း စစ်ဆေး စဉ် အအေး ကို သွန်း လောင်း ပါ။
မီးဖို ၏ ရေ တိုင် ကီ သို့မဟုတ် အစားထိုး ပြီးနောက် အအေး နှင့် система ကို ဖြ ည့်ပါ
ယို စိ မ့်မှုအတွက် အပူ ပေး စနစ်ကို စစ်ဆေး ပါ။
တပ်ဆင် မှု လုပ်ငန်း စဉ် ပြီးဆုံး ပါ က သင် အင်ဂျင်ကို စတင်ရန် လိုအပ်ပြီး အအေး အပူချိန်သည် လည်ပတ် မှု အပူချိန် လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်၊ ယို စိ မ့်မှုအတွက် ဆက်သွယ်မှု အားလုံးကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ အင်တီဖရီဂျင်ပမာဏကိုချဲ့ထွင်သည့်ကန်တွင်စစ်ဆေးပြီးလိုအပ်ပါကဖြည့်သည်။
အကယ်၍ မီးဖိုရေတိုင်ကီကိုအစားထိုးရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိပါကအပိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ယနေ့တွင်မော်တော်ယာဉ်ဈေးကွက်တွင်အပူဖလှယ်စက်အမျိုးမျိုးရှိသဖြင့်အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မလွယ်ကူပါ။ ဒီအပိုင်းကိုရူဘယ် ၅၀၀ နဲ့ ၃၀၀၀ ရူဘယ်နှစ်ခုလုံးအတွက် ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအရည်အသွေးကောင်းသောထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောထုတ်လုပ်သူများကို ဦး စားပေးသင့်သည်။
AvtoVAZ, Pekar, Luzar, SHAAZ;
Oberkraft, Finord, အပို။
ရေဒီယိုရောင်ခြည်အသစ်တစ်ခု ၀ ယ်သောအခါအောက်ပါတို့ကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။
ကောင်းမွန်သောအပူဖလှယ်စက်တွင်ပျားလပို့များသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နီးစပ်သင့်သည်။
အထက်ပါအချက်များအပြင်၊ ၎င်းအပိုင်းကိုလူမီနီယံသို့မဟုတ်ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ မြင့်မားသောအပူလွှဲပြောင်းမှုနှင့်ပြုပြင်လွယ်မှုတို့ကြောင့်ကြေးနီဓါတ်ရောင်ခြည်များသည်ငြင်း။ မရသောအားသာချက်များရှိသည်။ သို့သော်သူတို့၏ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းကြောင့်၎င်းတို့ကိုလျော့။ သုံးစွဲမှုနည်းသည်။ လူမီနီယမ်သည်တတ်နိုင်သောကုန်ကျစရိတ်၊ အလေးချိန်လျော့နည်းသော်လည်း၊ ယိုစိမ့်မှုဖြစ်လျှင်အစိတ်အပိုင်းကိုပြန်လည်ထားခြင်းသည်အတော်လေးပြaticနာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်, စည်းကမ်းအတိုင်း, လူမီနီယံထုတ်ကုန်အစားထိုးရမည်ဖြစ်သည်။
aluminium radiator သည်ကြေးနီထက်စျေးသက်သာသော်လည်းယိုစိမ့်မှုပေါ်လာပါက၎င်းကိုအစားထိုးရန်လိုအပ်သည်
Zhiguli ရှိမီးဖို၏ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်ပြproblemsနာများကိုပထမတစ်ချက်ကြည့်သကဲ့သို့ထင်ရခက်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ အပူဖလှယ်သူနှင့်ပြproblemsနာများရှိပါက၎င်းတို့ကိုဖြေရှင်းရန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သင်ဆက်သွယ်စရာမလိုပါ — သင်ကိုယ်တိုင်အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်သည်၊ ယခင်အဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်
Previous post Резонатор фото: Резонатор и…
Next post Замена мотора отопителя рено…